Midongy-Atsimo: Lavo i « Remenabila 2 »
jeudi, 03 octobre 2019 17:19
Nisento tokana ny mponina taty amin’ny Distrikan’i Midongy-Atsimo taorian’ny nandrenesana vaovao fa maty voatifitra i Riri, dahalo raindahiny nampihorohoro iny faritra iny hatramin’ny 2016. Nahazo anaram-bositra « Remenabila 2 » mihitsy i Riri noho io asa ratsiny io.
Nahazo vaovao ny Zandary avy ao amin’ny « Poste Fixe » Lopary, Vangaindrano fa tonga ao amin’io Fokontany io i Riri ny 1 oktobra 2019. Natao avy hatrany ny fisamborana. Tsy nanaiky mora i Riri fa nanohitra tamin-kery. Nisy ny fifandonana, niaro tena ireo Zandary. Teo no nahalavo an’i Riri. Mitohy ny fikarohana izay mety ho mpiray tsikombakomba aminy ao Lopary.
Naneho fankasitrahana ny Zandary ny solombavambahoakan’i Midongy Atsimo, Retsanga Brillant de l'Or, tamin’ny nanilihana an’i Riri, izay nampitondra faisana ny mponina taty amin’ny Distrikan’i Midongy Atsimo.